Nosintonin’ny Governemanta Ao Singapore Ny Famatsiambola An’ity Tantara An-tsary ity, Ary Maniry Ny Hahabetsaka Kokoa Azy io Ny Mpamaky Amin’izao Fotoana · Global Voices teny Malagasy
“Mety hanimba ny fahefàna na ny maha-ekem-bahoaka ny governemanta sy ireo andrimpanjakana ny famerenana mitanisa ny tantaran'i Singapore ao anatin'ilay boky, ka araka izany dia manitsakitsaka ny torolàlanay momba ny famatsiambola.” Khor Kok Wah, tale ambony ao amin'ny sampana haisoratra ao amin'ny NAC, nilaza tamin'ny mpanao gazety hoe. “Mivoaka ao anaty aterineto ireo torolàlan'ny famatsiambola ataon'ny filankevitra ary fantatra tsara eo amin'ny tontolon'ny haikanto.”
Manaraka ny dian'i Charlie Chan, ilay maherifo, mpahaikanto iray mpanoratra tantara an-tsary, ity boky ity, ary mitety ireo taona maro nandrafetana ny tantaran'i Singapore. Lee Kuan Yew, praiministra ao Singapore, hatramin'i Lim Chin Siong (mpifaninana ara-politika amin'i Lee, izay notànana tsy nisy fitsaràna taty aoriana), dia hita ihany koa ao anatin'ilay boky. Lazain'ilay tantara ihany koa ny famonjàna tao anatin'ilay fandraofana faobe fantatra tamin'ny hoe Operation Spectrum tamin'ny 1987 nanjo ireo mpisolovava, mpiasa sosialy, sy ireo mpikatroka mafàna fo.
Nanoratra tao amin'ny Facebook ho fisaorana ny olona noho ny fanohanan'izy ireo i Sonny Liew, ary nisarika ny saina ho amin'ireo olana mikasika ny anjara toeran'ny volam-bahoaka amin'ny haikanto:
Bryan Chan Yin Seng Raha toa ka tantara kely iray feno hanihany no afaka manimba ny fahefana sy ny fankatoavana azy, tokony tena fanontaniana voalohany indrindra apetraky ny governemanta amin'ny tenany ny fanontaniana momba ny harefon'ny fahefan'io governemanta io sy ny maha-ara-dalàna azy.
Chee Hoe Siew Boky tantara an-tsary iray mampiasa ny tantaran'i Singapore ho fototra iaingàny io. Ahoana no hitakiana aminy hanana fijery tena mety maneho ny tantara? Raha izany no izy, tokony hanao dingana ny governemanta hampivondrona ny bokin-tantara tsirairay.
.@kixes tena marina fa ny hany zavatra tsara noho ny tohana ara-bola ho an'ny haikanto ao Singapore dia ny fisintonan'ny governemanta ny famatsiana ny haikanto
Mandehana mividy & manohana ilay boky vaovao novokarin'i @sonnyliew “The Art of Charlie Chan Hock Chye” ho fanoherana ity fanivanan-tena tsy misy dikany ity